Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu: Nke kacha mma na nke kacha njọ
Airlines • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi Colombia • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • News • Akụkọ North Korea na -agbasa • Akụkọ na -agbasa na Singapore • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Nnyocha ụgbọ elu - Nke kacha mma na nke kachasị njọ
Ọmụmụ na-enyocha ahụmịhe ndị njem nke Bounce mere maka ihe ndị dị ka ọrụ, nri, nkasi obi, na ntụrụndụ, yana ọnụ ọgụgụ mkpesa na oke ikike ibu, na-ekpughe ihe kacha mma - na nke kachasị njọ - ụgbọ elu na USA na gburugburu ụwa.
A na-akpọ ụgbọ elu Delta dị ka ụgbọ elu ụgbọ elu US kacha mma, ebe Ana All Nippon bụ ụgbọ elu mba ụwa kacha mma n'ụwa, na nyocha ọhụrụ.
Ụgbọ elu ụlọ 5 kacha mma na USA
n'usoro Airline Ọbịbịa n'oge (July 2021) Mkpesa Jan-June 2021 Ọrụ Ndị Ọrụ (/ 5) Nri (/5) Nkasi obi (/5) Ntụrụndụ ụgbọ elu (/5) Onyinye kacha ibu (kg) Akara Ndekọ ụgbọ elu/10
1 Delta ụgbọ elu 86.7% 494 3 3 3 3 23.0 8.9
2 Hawaiian ụgbọ 87.7% 115 3 3 3 2 22.5 8.5
3 Izongbọ elu Horizon 83.5% 17 4 3 3 1 22.5 8.4
Inweta ọkwa kachasị elu bụ Delta, na-enye akara nke ukwuu n'ihi na ọ nwere pasentị nke abụọ kachasị elu nke ndị mbata na oge (86.7%) yana ọnụ ọgụgụ mkpesa dị ntakịrị, 494 site na Jenụwarị ruo June nke 2021.
Abịa nke abụọ bụ ụgbọ elu Hawaii. Dabere na Honolulu, ọ bụ nke iri kacha ukwuu ụgbọ elu azụmahịa na US. N'agbanyeghị na-abịa nke abụọ n'ozuzu, ọ bụ ụgbọ elu kacha n'oge na 87.7% nke ụgbọ elu na-apụ n'oge. Agbanyeghị, ọ na-eweda ya ala site na enweghị ntụrụndụ inflight, na-enweta naanị abụọ n'ime ise.
Ụgbọ elu ụgbọ elu 5 kacha mma n'ụwa niile
n'usoro Airline Mkpesa Jan-June 2021 Ọrụ Ndị Ọrụ (/ 5) Nri (/5) Nkasi obi (/5) Ntụrụndụ ụgbọ elu (/5) Onyinye kacha ibu (kg) Akara Ndekọ ụgbọ elu/10
3 Usoro ikuku Korea 21 4 4 4 4 23 9.2
4 Ụlọ ọrụ Japan Air Lines 45 4 4 4 4 23 9.2
Dabere na Tokyo, Ana All Nippon Airways bụ ụgbọ elu kacha ibu na Japan site na ego ha nwetara na ọnụọgụ ndị njem. Ọ bụ ọkwa kachasị elu na ọrụ ndị ọrụ nwere ọkwa nke ndị ahịa, naanị ụgbọ elu dị na ndepụta anyị iji nweta akara zuru oke na ndeksi ụgbọ elu anyị maka ihe a. O nwekwara ọnụ ọgụgụ mkpesa dị ntakịrị na 34.
Ụgbọ elu Singapore nọ n'ọkwa nke abụọ n'ihi nnukwu ohere ibu ya nke kilos 30, ọnụ ọgụgụ dị nta nke mkpesa (23), na nkasi obi dị elu, ebe ha nwetara ihe nrite maka oche ụgbọ elu ha. Ụgbọ elu Singapore na-enweta akara anọ n'ime ise maka ụdị ọ bụla dị na ndeksi anyị, yabụ ọ bụghị ihe ijuanya na ụgbọ elu a na-abịa nke abụọ na ọkwa anyị dị ka ụgbọ elu mba ụwa kacha mma.
Ụgbọ elu ụgbọ elu 5 kacha njọ n'ụwa niile
3 Lagbọ elu Volaris 379 2 2 2 1 10 4.0
A na-akpọ ụgbọ elu ụgbọ elu dị ọnụ ala Viva Air Colombia ụgbọ elu kacha njọ n'ụwa. Onye na-ebu ụgbọelu a na-enye akara otu n'ime ise n'ime ndeksi anyị maka nri, ntụsara ahụ oche, na ihe ntụrụndụ n'ihi na a na-enye ndị ahịa ihe eji enyere ndụ aka n'efu. Agbanyeghị na ọ natara ọnụ ọgụgụ mkpesa kacha ala n'ozuzu ya.
Dabere na ọdụ ụgbọ elu Monterrey International na Mexico, VivaAerobus Airline na-ebu ndị njem n'ime yana na-arụkwa ụgbọ elu mba ụwa na-aga obodo dị na US. Ọ na-enweta otu n'ime ise n'ime ndeksi anyị maka ma ntụrụndụ inflight na nri yana abụọ n'ime ise maka ọrụ ndị ọrụ.
Enwere ike ịhụ akụkọ zuru ezu ebe a.
Ọ dịkarịa ala, mmadụ 29 nwụrụ na ihe mgbochi okpukperechi Liberia January 20, 2022